Xildhibaano eedeyn kulul u jeediyay Xukuumadda – Hornafrik Media Network
Xildhibaano eedeyn kulul u jeediyay Xukuumadda
By Liibaan Nuur	 On Sep 24, 2019
Qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen xaaladda guud ee dalka, iyo dhacdooyinkii u dambeeyay ee ay ugu waa weynaayeen is hortaagii lagu sameeyay madaxweynihii hore Shariif Sheikh Axmed iyo cuna qabateynta Jubbaland.
Xildhibaanada ayaa waxay kulankooda uga hadleen mas’uuliyaddooda ku aadan arimaha ka socda dalka iyo sida ay uga gaabiyeen la xisaabtanka xukuumadda, iyagoo isku booriyay in ay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah.
Xildhibaanada ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in xukuumaddu si barer ah ay u jabisay dastuurka dalka, ayna ku kacday qiyaano qaran, iyagoo soo ban dhigay qodobada ay ku eedeynayaan in ay jabiasay xukuumaddu.
Xildhibaanada ayaa sheegay in xukuumaddu ay ku guul dareysatay gudashada waajibaadkii loo igmaday, sida amniga, wada shaqweyn dghex marta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, dib u habeynta qabyo tirka dastuurka dalka, hanaanka doorashooyinka, dhameystirka hey’adaha dastuuriga ah ee dalka iyo garsoorka.
Xildhibaanada ayaa war-saxaafadeedkooda ki cambaareeyay ku tumashada dastuurka dalka iyo ku tagri falka awoodeed oo sida ay sheegeen xukuumaddu ay ku kaceyso, iyo sidoo kale cuna qabateynta ay saartay madaxdii hore ee dalka iyo shacabka reer Jubbaland.
Xildhibaanadu waxey sheegeen in sigaar ah ay u cambaareynayaan xanibaadii lasaaray duulimaadyadii aadi jiray magaalada Kismaayo, taas oo ay sheegeen in shacabku ay dhib weyn ku qabaan.
Hoos ka aqriso qoraalka xildhibaanada oo dhameystiran:-
Warsaxaafadeed September 24 2019 2 768×994
Waa maxay sababta ciidamo laga qaaday Muqdisho looga dajiyay Baardheere?